Qisaddii Nabi Ismaaciil c.s - QuraanKa MacnihiiSa Afka SoomaaLiGa
Qisaddii Nabi Ismaaciil c.s
Sababtii keentay in Illaahay amro Nebi Ibraahiim inuu bireeyo Wiilkiisa Ismaaciil CS.Sababta keentay in Nebi Ismaaciil CS la amro in la bireeyo xaqiiqada Illaah baa garanaya, balse sida la sheegay Nebi Ibraahiim CS ayaa sadaqeeyey 1.000 Neef oo Ari ah, 300 oo lo'ah iyo 100 Neef oo Geel ah, wuxuuna ku baxshay jidka Illahay, dadkii ayaa la yaabay, markaabaa Nebi Ibraahiim CS wuxuu yiri "waxaan baxday agtayda waxba kama ahaa, balse Illah baan ku dhaartee haddii uu ii ahaan lahaa wiil jidka Illahay ayaan u bireyn lahaa, Illahey ayaana ugu dhawaan lahaa "markii uu saas yiri Nebi Ibraahiim CS waqti badan ayaa la joogay, kaddib Illahay ayuu weydiistay awlaad,(ilmo) Illahayna wuu ka aqbalay, waxaana loogu bishaareeyey walad, waxaana loo dhalay Nebi Ismaaciil (CS). Nebi Ismaaciil CS markuu weynaaday ee uu gaaray dhowr sanno, ayuu Nebi Ibraahiim (CS) ku riyooday isagoo bireynaya wiilkiisa Ismaaciil CS, laguna yiri oofi nadarkaagii (dhaartaadii hadda ka hor).Markii waagu beriyey ayuu ku fekeray tolow ma amar xag Alle ka yimid baa riyadu, mise waa shaydaan.Galabtii ayuu haddana ku riyooday wuxuuna xaqiiqsaday in xagga Alle laga amray, inuu bireeyo wiilkiisa Ismaaciil CS. Maxaa yeelay Riyada Nebiyadu waa xaq, waxayna la mid tahay iyadoo loo waxyooday. Nebi Ibraahiim (CS) wuxuu ku yiri, Haajara oo ahayd Nebi Ismaaciil hooyadiis "Wiilka dhar fiican u xir meel baan aadaynaayee "hooyo Haajara Ismaaciil CS dhar fiican ayey ugu labistay wayna u subagtay, wayna u shanlaysay. Nebi Ibraahiim CS wuxuu qaatay xarig iyo mindi, waana is raaceen isaga iyo Nebi Ismaaciil (CS). Nebi Ismaaciil CS aabihiis ayuu hor socday in la biraynayana ma ogeyn isaga iyo hooyo Haajaraba. Ibliis (shaydaan) ayaa damcay inuu ka faa'iidaysto, markaa buu Nebi Ibraahiim CS ku yiri: "miyaadan arkayn wiilkaan baa la qali karaa?".
Ismaaciil wuxuu yiri: Aabbaheeyow samee waxa Illahay ku amrayo, waad i heli doontaa haddii Alle idmo inaan ka mid ahay dadka wanwanaagsan. Nebi Ibraahiim CS markii uu maqlay hadalkii wiilkiisa Ismaaciil, wuxuu qiray(Ogaaday)in Illahay u ka ajiibay ducadiisii hadda ka hor uu Illahay ku baryay oo ahayd:(Rabbi hablii minal salixiin)
Nebi Ibraahiim CS Illahay ayuu ku xamdiyay intaa kaddib nebi Ismaaciil CS ayaa yiri: Aabaheeyoow waxaan kuu dardaarmayaa dhowr shay:-
Illahay ayaana ku yiri: fiiriya addoonkayga sida uu ugu kir-kirayo (marmarinayo) middida qoorta wiilkiisa, isagoo rilaheyga dalbay (doonaya).
Intaas waxaa inoogu dhamaaday Qisadii Nebi Ismaaciil CS oo kooban.